Xiisad u dhaxeysa laba Ciidan oo ka taagan Muqdisho - Awdinle Online
Xiisad u dhaxeysa laba Ciidan oo ka taagan Muqdisho
Ciidamo ka tirsan Millaterriga Soomaaliya iyo kuwa Badda ayaa isku heysta dhul ku yaal agagaarka Xeebta Iskuul Bulusiya ee degmada Xamar-Jajab, halkaas oo ah goob dadka lagu Aaso.
Kilafkaan ayaa waxaa uu ka dambeeyay sida la sheegay kadib markii Ciidamo ka tirsan kuwa Badda ay isku dayeen inay dhistaan Dhulka Qabuuraha ah ee u dhaxeeya Iskuul Bulusiya iy Isbitaalka Yardameeli una dhow Fagaaraha dadka lagu toogto.
Mid kamid ah dadka ku nool aaga Dhulka la isku heyto ayaa sheegay in Ciidamo ka tirsan kuwa Millateriga oo wata Gaadiidka dagaalka ay ka horyimaadeen in Ciidamada ka tirsan kuwa Badda ay dhulkaasi dhistaan, in kastoo aan si rasmi ah aan loo ogaan waxa ay doonayeen inay ka dhisaan.
Sidoo kale Goobjoogaha ayaa waxaa uu hadalkiisa uu intaasi ku daray in dadka degan Xaafadaha u dhow dhulka ay Ciidamada isku heystaan ay soo wajahday cabsi ku aadan in dushooda lagu dagaalamo.
Dhowr jeer ayaa Magaalada Muqdisho xaafado ka tirsan waxaa ku dagaalamay Ciidamo ka wada trsan kuwa dowladda Soomaaliya, kuwaas oo u abaabulan hab beeleed iskuna heysta dhul.
Previous articleGolaha Ammanka oo ku baaqay in xal deg deg ah laga gaaro doorashada Soomaaliya
Next articleDeni oo Safiirka Sweden kala hadlay khilaafka doorashada Soomaaliya